Dowladda Ruushka waxay taageertay qabyo-qoraalka sharciga "Soosaarka abuurka" - majaladda "Nidaamka Baradhada"
в Gobolka, News
Bishii Febraayo 17, Raiisel Wasaaraha Mikhail Mishustin wuxuu shir gudoomiyay kulan ay yeesheen Dowlada Ruushka, kaasoo lagu soo bandhigayay nooc cusub oo ka mid ah sharciga federaalka ee soo saarista abuurka, ayna soo saartay Wasaaradda Beeraha ee Ruushka. Ujeedada ugu weyn ee biilku waa in la abuuro shuruudaha lagama maarmaanka u ah horumarka wax ku oolka ah ee suuqa abuurka ee dalkeenna.
Mikhail Mishustin ayaa sheegay in tani ay tahay dukumiinti muhiim u ah waaxda beeraha ee dalka. Goosashada wanaagsan iyo, dabcan, faa'iidada beeraha badan waxay kuxirantahay waxyaabaha la beero, ”ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha.
Daabacaadda cusub ee sharciga ayaa qeexaysa fikradaha aasaasiga ah waxayna nidaamineysaa geeddi-socodka ugu muhiimsan ee la xiriira soo-saarka, iibinta iyo keydinta abuurka, waxaa la qorsheynayaa in la sameeyo sharci-hoosaadyo go'aamiya shuruudaha tayada abuurka. Dukumiintiga wuxuu siinayaa abuuritaanka nidaam macluumaad oo heer federaal ah oo ku saabsan wax soo saarka abuurka dhirta beeraha. Waad ku mahadsan tahay ilahaan dhijitaalka ah, soo saarayaasha beeraha waxay awoodi doonaan inay helaan macluumaad ku saabsan helitaanka abuurka tayo sare leh oo leh astaamo cayiman suuqa, iyo sidoo kale inay ogaadaan in abuurkaani ku habboon yahay taranka xaaladaha gaarka ah. Nidaamka loogu daro noocyo cusub Diiwaanka Gobolka ee Guusha Taranka ayaa sidoo kale la caddeeyay, iyada oo lagu saleynayo nooc kasta oo ay tahay in la tijaabiyo, iyadoo la tixgelinayo waxyaabaha gaarka u ah gobolka.
Dawladdu way taageertay biilka dhawaana waxaa loo gudbin doonaa Duma-da Gobolka si ay uga fiirsadaan.
Tags: abuur abuurWasaaradda Beeraha ee Xiriirka Ruushka
Waxaa laga yaabaa inaysan jirin shaqaale ku filan oo fuliya shaqada beeraha xilliga cusub
Wasaaradda Beeraha ee Ruushka waxay soo jeedisay in la beddelo waqtiga barnaamijka cilmiga ah ee horumarinta beeraha